विश्वमै नघटेको आश्चर्य चकित पार्ने घ,टना ! २० जना भुतसंग यौ न सम्पर्क गर्ने यी युवती, भुतकै बच्चा जन्माउने चाहना (भिडियो) – Butwal Sandesh
विश्वमै नघटेको आश्चर्य चकित पार्ने घ,टना ! २० जना भुतसंग यौ न सम्पर्क गर्ने यी युवती, भुतकै बच्चा जन्माउने चाहना (भिडियो)
एजेन्सी । दुनियालाई नै चकित पार्ने घटना इंग्ल्यान्डमा घटेको छ । २१ औ शताब्दीमा भुत हुदैन भन्नेहरुलाई एक पटक सोच्न बाध्य बनाएको छ । घटना हो इंग्ल्यान्ड ब्रिस्टोलको । २७ बर्षीय अमेथि राइमले दुनियालाई चकित पार्ने घटनाको सनसनी खुलासा गरेकी छिन। उनले कम्तिमा पनि २० जना भुतहरुसंग से क्स गरेको भन्दै सनसनीपूर्ण दाबी गरेकी छिन ।
एक ब्रिटिश ईटिभी शोमा उनले यो खुलासा गरेकी हुन् । करिब १२ बर्ष पहिले उनीहरु नया घर किनेर सरेपछि उक्त घरमा अनौठो खालको दृश्यले उनको शरीरमा छोएको महसुस हुन थाल्यो ।
जसले छुदा यौ न इच्छा जगाउथ्यो जसले शरीरमा आएको आनौठो शक्तिले बिस्तारै शरीरमा छुदै से क्स गर्ने गर्दथ्यो । उनले भनिन मैले भुत संग से क्स गरे ! अनि के तपाईले अनुभव गर्नु भयो भन्ने प्रश्नमा उनले भनिन यसलाई म कसरी व्यक्त गर्नु बताउन धेरै गारो छ । केहि अदृश्य अद्भुद चिजले शरीर छोए जस्तो केहि गह्रौ भए जस्तो र केहि शक्ति आए जस्तो हुन्थ्यो । जुन भुतले तीन बर्ष सम्म से क्स गर्यो ।
त्यसपछि उनले बिवाह गरिन र उनको श्रीमान काम बाट फर्किदा झ्यालबाट छाया देख्ने गर्थिन । तर अमेथि राइम ति भुतहरु रमाइलो गर्थिन खेल्थिन । उनको २० जना भुतहरु यौ न पार्टनर थिए । उनले ति भुतहरु बाटै आफु बच्चा जन्माउन चाहना राखेकी छिन् । तर के यो सम्भव होला त ? उनले रिसर्च गर्दै छिन । विभिन्न असाधारण अनुसन्धानविदहरुले यसलाई अनौठो र असराधरण बताएका छन् । यद्धपि अ नुसन्धान गर्दै छन् ।